Iibinta Kadib-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
Waaxdeena-Iibinta Kadib ayaa kaa caawin doonta haddii aad wax su'aalo ama dhibaatooyin ah qabtid.
Dammaanad qaadku wuxuu daboolayaa: hoos u dhigid, dildilaac, finno iyo delamination. Damaanad-qaadkani ma daboolayo xirashada iyo jeexitaanka alaabta, daxalka dibedda, shilka, shilalka ama nooc kasta oo waxyeelo ula kac ah oo ay geystaan ​​xoogagga dibaddu.
Filimka Ka-hortagga Rinjiga KPAL waa in la dhigaa bakhaar hawo wanaagsan leh. Heerkulka qolku waa inuu u dhexeeyaa 20 ℃ iyo 28 ℃, qoyaankuna waa inuu ahaadaa 50-70%.
Taxaddarrada loo adeegsado filimka ilaalinta rinjiga:
1. Iska ilaali dhaqidda gaariga hal toddobaad gudihiis ka dib markaad filimka siisid si aad u hubiso in sida ugu fiican ee isku dhejisan ay u dhexeyso xabagta iyo rinjiga;
2. Markaad nadiifinayso gaadhiga, iska ilaali inaad isticmaasho qori biyo-kar ah oo aad ku maydho cidhifyada xuubka;
3. Markaad nadiifinayso gaadhiga, iska ilaali inaad isticmaasho burushyo iyo kiimikooyin waxyeellaynaya;
4. Ka fogow walxaha adag ee xoqida iyo xoqida dusha sare ee filimka si adag. Raadadka xoqitaanka iyo xoqitaanku waxay saameyn ku yeelan doonaan saameynta guud ee filimka
5. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku sameyso daryeel joogto ah dusha xuubka labadii biloodba mar;
6. Laguma talin in lagu nadiifiyo dusha filimka;
7. Awoodda shucaaca ultraviolet ee qorraxda xagaaga waa mid aad u xoog badan. Baabuurkaaga ha dhigin banaanka wakhti dheer oo ha u dhigin qorraxda;
8. Baabuurkaaga ha dhigin geed hoostiisa, haddii kale waxaa jiri doona xabag badan oo guano shellac ah oo ku dheggan dusha xuubka, taas oo aad u daxalaysa oo sahlan in la waxyeeleeyo dusha sare ee xuubka;
9. Ha dhigin gaarigaaga hoostiisa marawaxadda qiiqa dhererka dheer, haddii kale waxaa jiri doona waxyaabo badan oo saliid ah oo dusha sare leh xuubka, taas oo aan sahlaneyn in la nadiifiyo;
10. Baabuurkaaga ha dhigin wakhti dheer barta uu ku dhibcoonayo ee godka hawo-qaboojiyaha. Biyaha qaboojiyaha ee wax qaboojiya waxay dhaawici doonaan qaab dhismeedka dusha sare ee filimka;
11. Baabuurka ha dhigin gaariga muddo dheer, aashitada ku jirta roobka waxay baabi'in doontaa dusha xuubka;
12. Haddii loo isticmaalo sidii gaariga arooska, koobka tooska ah ha ku dhajin dusha xuubka; marshooyinka gawaarida arooska, dabka iyo rashka ayaa si fudud u sababi kara wasakhda dusha xuubka, waxayna u baahan yihiin in la nadiifiyo oo la ilaaliyo 12 saacadood gudahood;
Haddii loo baahdo, kooxda KPAL ayaa kula shaqeyn doonta muddo aad u yar gudahood si ay arrimahaaga u daryeelaan.
Fadlan noo soo gudbi macluumaadka soo socda:
· Sawirka nambarka taxanaha ah ee filimka, kaas oo badanaa lagu dhajiyo gudaha xudunta tuubbada, oo noo sheeg nooca la soo iibsaday
· Muuqaalo ama sawiro muujinaya nambarka taarikada iyo dhibaatooyinka filimka gaariga saaran
· Qaabka gaariga iyo sanadka